Maqal - BBC Somali
Dhowrkii sanno ee ay Soomaaliya burbursaneyd waxaa jiray dad ajnabi ah oo dhex galay dadka Soomaalida kuwaa oo xitaa bartay dhaqanka iyo luuqada Soomaaliga.
25 Sebtembar 2017
Barnaamijka Waxa ay Ila Tahay ee doodda galabta waxaanu kaga hadli doonnaa doodda kulul ee ka taagan doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee dalka Kenya. Cabdifitaax Ibraahim Cagayare ayaa soo jeedinaya.
24 Sebtembar 2017
Ma haboon tahay in Soomaaliya xilligan laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran?
Dowlada Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay baaqii ahaa in cunaqabataynta hubka ee saran laga qaado.
Garoonka Muqdisho oo 27 sano ka dib ay xilli habeen ah diyaarad ka degtay
27 Sano ka dib, habeenimadii xalay waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka soo degtay diyaarad rakaab waday.
Sideebuu u socdaa ololaha doorashada Jarmalka?
Waxaa berrito dalka Jarmalka ka qabsoomeysa doorasho guud, iyadoo maantana uu ku egtahay ololaha doorashada dalkaasi.
23 Sebtembar 2017
Maktabaddii ugu horeysay oo laga furay Kismaayo
Sanadihii u dambeyay Soomaaliya waxay ku talaabsatay horumar dhanka waxbarashada ah.
Qaxooti Kismaayo ku noqday oo isdhexgal bulsho loo sameeyey
Boqolaal qaxootigii ka noqday deegaanka Dhadhaab oo Kismaayo la geeyey ayaa hada loo bilaabay barnaamija isdhexgal ah oo Qaxootigii hore lagu barayo dhaqanka iyo hidaha.
22 Sebtembar 2017
Oday 76 jir ah oo 27 sano quudinayay maxaabiis
Bal ka warran haddii muddo 30 sano ku dhow ay shaqadaada noqoto inaad u adeegto maxaabiis ku xiran xabsi ku yaala magaaladda aad deggan tahay ?
Waraysi: Doorka abwaanada ee nabadaynta
Soomaaliya ayaa la daalaa dhaceysay ku dhawaad 30 sano colaado iyo tacadiyo ba'an oo ka dhan ah xuquuqul insaanka.
Kenya: Khilaafka ka taagan go'aankii Maxkamada Sare
Maalmahanba waxaa kenya ka taagnaa dood xoogan oo ku saabsan doorashada ku celiska ah ee ay maxkamada sare go'aamisay in lagu qabto laba bilood gudahood.
Majaajilayste Rashiid Nuur oon waraysannay
Rashiid Nuur Jaamac oo ah jilaa majaalilada ku caan ah oo reer Djibouti ah ayaa Soomaalidu meel ay joogtaba kala socdaan baraha bulshadu ku xiriirto.
20 Sebtembar 2017
Falanqayn: Trump muxuu ku qoonsaday Qaramada Midoobay?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii ugu horeysey ee uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ku sheegey in caalamka ay jaah wareeriyeen wadamo kooban oo qas wadayaal ah, loona baahan yahay in caalamku u midoobo siddii loo jebin lahaa.
Xarun isgaadhsiineed oo lagu qarxiyey gobolka Gedo
Wararka laga helayo gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa sheegaya in habeen hore la qarxiyay xarun isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda Hormuud oo ku taala tuulada Khadiijo Xaaji oo u dhexeysa magaalooyinka Beled Xaawo iyo Ceel Waaq.
Dhuxulaysiga oo xaalufin ba'an ku haysa deeganada Somaliland
Dhuxusha laga soo shido dhirta la goynaayo, ayaa dhibaato weyn oo xaalufin ah ku haysa deegaanka iyo daaqa xoolahaba.
19 Sebtembar 2017
Maxkamaddu Maxay u beriyeeshay ninka lagu eedeeyay in uu nabiga aflagaadeeyay?
Maxkamad ku taalla Koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa sheegtay in ay dembi ku wayday nin lagu eedeeyay in uu nabiga (SCW) uu u gefay.
Ninka lagu eedeeyay in uu nabiga aflagaadeeyay oo BBC la hadlay
Sh.cabdiweli Sh. Cali Cilmi Yare ayaa BBC u sheegay in laga been abuurtay hadalkiisana si xun loo dhigay
Maraykanka: Soomaali abaal marin ku guulaystay
Wiil dhaliyaro ah oo Soomaali ah ayaa ku guulaystay abaal marinta loo yaqaan "Facing Race Award" oo laga bixiyo gobolka Minnesota.
Galmudug:Nin Nebiga "af-lagaadeeyeey" oo la raadinayo
Maamulka Galmudug ayaa laamaha nabadgelyada ee dowlad goboleedkaas ku amray in ay soo qabtaan nin la sheegay "inuu ku xad gudbay diinta Islaamka."
Shiinaha oo indhihii reer Galbeedka kuwo ka duwan ku eegaya Afrika
Sanadihii u danbeeyey waxa sii kordhayey xidhiidhka Shiinuhu la leeyahay qaaradda Afrika, waxaana isa soo taraya dedaalka Shiinuhu ugu jiro inuu si haboon u fahmo dhaqamada kala duwan ee quruumaha Afrika.
17 Sebtembar 2017
Nin malawadkiisa ku soo qariyay Dahab oo la qabtay
Shirkadda Facebook oo macluumaad la wadaageyso Mareykanka
Garsooraha Kenya ee Taariikhda Afrika galay